Ramos oo cadeeyay go’aankiisa ku aadan cusbooneysiinta qandaraaskiisa iyo ka tagistiisa Real Madrid – Gool FM
(Madrid) 03 Seb 2020. Kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa xaqiijiyay inuusan jirin wax heshiis ah uu la galay maamulka kooxda ee ku aadan cusbooneysiinta qandaraaskiisa mudada soo socota, taasoo sare u qaadeysa walaaca ay jamaahiirta ka qabaan mustaqbalka ciyaaryahanka.
Qandaraaska Ramos ee Real Madrid ayaa dhacaya xagaaga 2021, haddii ay dhacdo in qandaraaskiisa aan la cusbooneysiinin inta lagu jiro xilli ciyaareedka cusub, wuxuu si bilaash ah uga tagi doonaa kooxda xagaaga soo socda.
Balse Sergio Ramos ayaa laabta u qaaboojiyay taageerayaasha kooxda Real Madrid arrinta ku saabsan mustaqbalkiisa, kaddib markii uu tilmaamay inuusan waligiis ku fikiri doonin inuu ka tago Los Blancos, uuna doonayo inuu sii joogo sanado dheeri ah, sidaas darteedna waxaa jirta fursad weyn oo ah in labada dhinac ay heshiis gaaraan bilaha soo socda.
Haddaba wargeyska “Marca” oo aad ugu dhow Real Madrid ayaa daabacay wareysi uu Ramos kaga hadlay mustaqbalkiisa kooxda Los Blancos, wuxuuna yiri:
“Cusboonaysiinta qandaraaskeyga? lama soo hadal qaadin, taasina wax walwal ah kama qabo, sababtoo ah marnaba kuma fikirin inaan ka tago Real Madrid, marka uma maleynayo inay dhibaato jirto” ayuu yiri Sergio Ramos.
“Manchester United waxay heysataa xiddigaha ugu fiican qadka dhexe ee adduunka” – Van de Beek